Leighton Meester, 31 taona, izay nanome voninahitra ny anjara toeran'i Blair Waldorf tao amin'ny andiany "Gossip Girl", dia nanapaka ny volony ary nanimba ny volony.
Nafana ny masoandro ary i Leighton Meester, nahatsapa ny lohataona, te hiova. Ilay mpilalao sarimihetsika, izay nanamaivana ny volony, tsy nisafidy felam-boninahitra marevaka, dia niboridana tsara ireo bozaka. Tamin'ny Talata, noho ny fohy ny halavan'ny volony dia lasa blaogy platinum izy.
Leighton Meester tamin'ny volana Janoary tamin'ity taona ity
Leighton Meester tamin'ny taon-dasa
Leighton Meester tamin'ny taona 2006
Leighton Meester dia nandao ny salon beauty tamin'ny Talata
Mba hahazoana antoka fa tsy nandiso fanantenana ny vokatr'izany, dia niaiky tamin'ny mpanakanto efa za-draharaha i Leighton ary nandany ora maromaro tao amin'ny salon Salon Nexxus tao New York, ary taorian'ny fizarana sary momba ny fizotran'ny fikolokoloana azy ao amin'ny Instagram Stories.
Ao amin'ny fanamarihana, nanoratra i Mister:
"Tsy mahatsiaro ho sariaka aho hoe lasa lasa blonda aho. Izany dia loko volom-bolo tanteraka tanteraka! Fa tiako izany! "
Leighton Meester ankehitriny dia blonda
Tamin'ny faran'ny herinandro, ireo hackers dia namoaka sary nalaina avy amin'ny kintan'ny "Gossip Girl", tsy nisy topi-maso izy ireo ary napetraka tao anaty akanjo tsara tarehy tsara tarehy, nitondra sangisangy.
Leighton Meester sy Adam Brodie
Famerenana ny andian-dahatsoratra "Gossip Girl" miaraka amin'ny Blake Lively: hevitra sy drafitra
Ny fitsangatsanganana voalohany: Leighton Meester dia namono ireo kisary niaraka tamin'ny zanany vavy
Efa lasa loko volom-bolo ny olo-malaza. Nalain'i Paparazzi tao amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenen'i Los Angeles. Toa hita fa ny endrik'ireo sarin'ireo sary malaza ao amin'ny tambajotra dia tsy mampiady an'i Layton manokana, nitsiky izy, nandeha tany anaty fiara.
Leighton Meester tao amin'ny seranam-piaramanidina
Mifantoka bebe kokoa amin'ny haben'ny akanjo: ao Jay Lo indray mipoitra indray ny akanjo!
Catherine Heigl dia nirehareha ny vokatry ny fahavoazany rehefa nateraka
Charlie Sheen dia te-handà ny fandresen'i Denise Richards
George Clooney sy Amal Alamuddin
Ben Affleck sy Jennifer Garner nanao fihetsiketsehana tsy misy ankizy
Nanjary liana tamin'ny "Star Wars" ny zanakavavin'i Mark Zuckerberg
Tany Madrid, nanolotra volom-borona Melania Trump tamin'ny akanjo manala baraka
Ny fisehoan'i Al Pacino mpankafy diso fanantenana
Victoria Beckham dia nanampy an'i Eva Longoria nanao akanjo mariazy
Ellen Degeneres dia nitifitra ary nitady ny zanak'i Jennifer Lopez teo am-pelatanan'ny fandaharana talk!
Inona avy ireo teny tsy tokony holazaina eo anoloan'ny fitaratra?
Fanamafisana ny bateria
Inona no atao hoe Ivan
Torohevitra avy amin'ny supermodel El MacPherson: ny fomba hisafidianana ny fisotroana tanteraka ho an'ny fety
Amin'ny inona no tokony hanaovana kapa manga?
Drunk Jessica Simpson tamin'ny andro nahaterahan'ny vadiny
Famolavolana ny efitrano ao amin'ny tranon'olon-tsotra
Noho ny fikarakarana alika?
Niteny i Amber Hurd fa nokapohiny i Johnny Depp, nampiseho mangana
Kitapo mofomamy ho an'ny rano
Fiampangana vaovao manohitra an'i Stephen Segal